टिचिङ अस्पतालमा काठमाडौँका तीनसहित चार कोरोना संक्रमितको मृत्यु ! « MNTVONLINE.COM
टिचिङ अस्पतालमा काठमाडौँका तीनसहित चार कोरोना संक्रमितको मृत्यु !
काठमाडौँ । महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत चार जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । अस्पतालका अनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा काठमाडौंका तीन र सिन्धुपाल्चोकका एक जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो । चारै जना पुरुष रहेका छन् ।
काठमाडौंका मृत्यु हुने तीन जनामध्ये ७० वर्षीय वृद्धको शनिबार साँझ ४ बजे मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । उनलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको अस्पतालले जनाएको छ । त्यस्तै, कोरोनाबाट मृत्यु हुने दोस्रो व्यक्ति ५९ वर्षीय बृद्ध भदौ १९ गते अस्पताल भर्ना भएका थिए । उनको शनिबार राति ११ः१५ बजे उपचारका क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । उनी मधुमेहबाट पीडित थिए ।
काठमाडौं तेस्रोे व्यक्ति ६४ वर्षीय वृद्ध हुन् । मिर्गौलाको डायलासिस गराउन अस्पताल पुगेका उनको आज बिहान २ः३० बजे मृत्यु भएको जनाएको छ । शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएका चौथो व्यक्ति सिन्धुपाल्चोकका ५९ वर्षीय बृद्ध हुन् । उनको गएराति १२ः३० बजे मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । उनलाई कोरोना संक्रमण भएपछि निमोनिया भएको जनाएको छ ।
असार २२, काठमाडौँ । तिहारको अवसर पारेर आगामी ४ कात्तिकमा रिलिज हुने नेपाली ऐतिहासिक फिल्म ‘नालापानी’को मोशन पोस्टर सार्वजनिक भएको छ। चलचित्र विकास बोर्डबाट ’विशेष